यौन Archives - Samaj Patra
मेरो श्रीमान् सधैं उग्र स्वभावको र अहंकारी प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। छोरी र परिवारका सदस्यहरूको कारणले मैले उसलाई कहिल्यै छोडिन। हामी दुवैले एकअर्कासँग विवाह गर्न बा’ध्य भयौं । किनभने हाम्रा बुवाहरूबीच …
काठमाडौँ पु’रुष यौ’न व्यवसायीले एकजना महिलालाई सन्तुष्टि दिलाएबापत एकपटकको १० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको सम्बद्ध संस्थाहरुको भनाइ छ । एक अध्ययनका अनुसार पछिल्लो समय संगठित रूपमा नै …
काठमाडौँ भारतको बिहारको वैशाली बाट सम्बन्धलाई लज्जित बनाएको एउटा घटना बाहिर आएको छ । यहाँ काका दिदीबहिनीले मन्दिरमा विवाह गरेका छन् । यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तिब्र रुपमा भाइरल …
काठमाडौं। शारीरिक सम्बन्धका लागि श्रीमती साटासाट गर्ने ठूलो गिरोहको खुलासा भएको छ । खुलासा भएसँगै यो गिरोहमा संलग्न ७ जना पक्राउ परेका छन् । गिरोहमा १ हजारभन्दा धेरै जोडी सक्रिय …
काठमाडौं । यौ/न जीवन कुनै पनि सम्बन्धमा ठूलो बदलाव भएर आउँछ। इमोसनका साथै जोडीबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्छ।तर,यसको असर यसैमा अन्त्य हुँदैन। यौ/न सम्बन्ध सुरु गरेपछि युवतीहरूको शरीरमा केही परिवर्तन …
‘से,क्स पा,वर’ बढाउन के गर्ने ?
काठमाडौँ मानिसलाई प्रिय लाग्ने गर्छ से,क्स । यसका लागि मानिसले खानपानदेखि लिएर बानी व्यहोरा एवम् आहारविहार सबै परिवर्तन गर्न मन्जुर रहन्छन् । किनभने उसका लागि से,क्स भनेको एक प्राकृतिक आवश्यकता …
आखिर किन कम हुन्छ महिलामा यौ,न चाहना ?
अक्सर के देखिन्छ भने, यौ,नका लागि पुरुष नै सधै तत्पर हुनुपर्ने । अर्थात पुरुषको इच्छा अनुसार नै महिलाहरु यौ,नका लागि तयार हुन्छन् । यौन मा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच …
फोनमा यौ,न र से,क्सका कुरा गरेर यस्तो आनन्द लिदैँ यूवा यूवतीहरू
यौ,न आनन्दका लागि अनेक उपाय निकाल्छन् अचेलका यूवा यूवतीहरू। से,क्सटोय, नी,ला फिल्म, अनलाइन भिडियो च्याटिङ अचेल उनीहरूका लागि सामान्य हुन्। रातपरेपछि फोनमा यौ,न उ,त्ते,जि,त कुराकानी गरेर आनन्द लिने युवा जमात …
९९प्रतिसत नेपालीलाई से,क्स गर्न आउँदैन ।
ना,ङ,गो हुनु से,क्सका लागि अनिवार्य जस्तै हो । नेपलमा यौ,नका विषयमा खुलेर कुरा गरिंदैन । यौ,नका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, यात त्यसलाई असाध्यै जटिल वनाईन्छ, या अति नै हलुका । …